November 2020 – Sanjal Nepal
November 30, 2020 admin 5291
काठमाडौ – भारतकी एक युवतीले यस्तो पे’न्टी बनाएकी छिन्, जसले युवतीहरुलाई ब’लात्का’रबाट ब’चाउन सक्छ । १९ वर्षकी सीनू कुमारी उत्तर प्रदेशको र्फरुखाबाद जिल्लाको एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका हुन् । उनले बनाएको ‘रे’प प्रुफ पे’न्टी’मा एक
November 30, 2020 admin 3858
November 30, 2020 admin 3946
November 30, 2020 admin 3289
काठमाडौँ । तपाई दिन भरी कयौँ काम गर्नुहुन्छ ताकि लक्ष्मी माता खुशि भएर तपाईको घरमा खुशी छाओस् । त्यहि हामी मध्य कोहि त यस्ता पनि छौँ जो जिवन भरि कडा परिश्रम गर्दा पनि रोजी-रोटीको जुगाड
नेपाल आउँन लागेका प्रेमले बुलेट बाइक किन्न लगाए, तर चढ्न पाएनन् !
November 30, 2020 admin 3061
काठमाडौ । भारतको सिमा रक्षाका लागि फेरी एक नेपालीले ज्या’न गु’माएका छन् । भारतीय सेनामा धेरै नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरुलाई सि’माना र’क्षाका लागि भारतले प्रयोग गर्दै आएको छ । भारतीय सेनामा कार्यरत दाङ तुलसीपुरका
November 30, 2020 admin 2570
November 30, 2020 admin 5295
काठमाडौ । अष्ट्रेलियाको तास्मानियामा एक नेपालीले विश्वकै ठूलो मखमली फूलको खेती शुरु गरेका छन् । खेतवारीका लागि जग्गा किन्ने काम सकिएर डिजाईन, खनजोत समेत सकाएर बिउ छर्ने काम भइसकेको छ । उनी टिकटकमा समेत खुबै
मेलिना राई र हरीको ‘सुनन’मा लक्ष्मीसँग रोमान्टिक अवतारमा देखापरे अभिनेता दयाहाङ ( भिडियो सहित)
November 30, 2020 admin 1602
काठमाडौँ । गायक तथा संगीतकार हरि लम्साल र मेलिना राईको स्वरमा तयार भएको सुनन बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । परानैदिन्छुको भाग २ का रुपमा तयार पारिएको सुननमा शब्द शृजना प्रलाद शाहको शब्द शृजना
बलात्कारीलाई १ सय ४६ बेतको सजाय, शरीरमा लौरो बर्सिन थालेपछि सहन नसकेर बेहोस भिडियो हेर्नुहोस !
November 30, 2020 admin 1559
काठमाडौं। इण्डोनेसियामा १९ वर्षका एक व्यक्तिलाई बालिका बलात्कारको अभियोगमा १ सय ४६ बेतको सजाय सुनाइयो । तर, सजाय भोग्ने क्रममा उनको हालत यतिसम्म बिग्रियो कि उनी बेहोस भएर त्यहीँ ढले । रोनी नामका यी व्यक्तिले
November 30, 2020 admin 1519